Wararka - Ereyga muhiimka ah ee qalabka 'Amazons' waa "qanacsanaan"
Ereyga muhiimka ah ee qalabka 'Amazons' waa "qanacsanaan"
Ereyga muhiimka ah ee qalabka 'Amazons' waa "qanacsanaan". Falsafadeena ganacsiga ayaa ah inaan siino macaamiisha adeegga ugu khibrada badan ee alaabta guryaha. Haddii aysan ku qanacsaneyn, waan sii wadeynaa inaan adeeg bilaash ah bixinno illaa macaamilka uu ku qanco. Dhaqanka aasaasiga ahi waa daacadnimo iyo daacadnimo iyo jawaab deg deg ah oo laga bixiyo su'aalaha macaamiisha.
Qalabka loo yaqaan 'Amazons Furniture' waxaa la aasaasay 2012, markii hore, inta badan wuxuu ku howlanaa soo saarista golaha wasiirada Mareykanka iyo qalabka guryaha. Hadda waxay noqotay shirkad alaab-qeybiye dhexdhexaad ah oo awood u leh inay keento fadhiga gogosha leh, qalabka alwaaxa adag, iyo qalabka guryaha.
Qiyamkeenu waa udub dhexaadka dhaqankeena. Waxay u adeegaan sida jaantus, taas oo ah inay sharraxayaan habka shaqada. Waxay bixiyaan midnimo ujeedo dhammaan heerarka habdhaqanka ururka.
Ujeedada Amazons Furniture waa inay noqoto xirfadle wax soo saar alaab guri. Qiimaha ugu muhiimsan waa in la dhexgeliyo alaab-qeybiyeha ugu fiican annaga si aan macaamiisha ugu siino khibradda ugu wanaagsan ee ugu fiican uguna dhaqso badan. Adoo u hoggaansamaya sharraxaadda macaamilka, naqshadeynta ayaa ku habboon alaab-gacmeedka caanka ah, yaree qiimaha alaabta, si loo gaaro inta badan ee suuqyada alaabta guryaha intii suurtagal ah.
Intii lagu gudajiray Cudurka faafa ee COV-19 sanadkii 2020, Amazons Furniture waxay xooga saartay soo saarida wax soo saar cusub oo ku habboon suuqa waxayna tamar badan gelisay horumarinta iyo soosaarka alaabta guryaha lagu kariyo. Hadda qalabka guryaha sida guryaha eeyaha, guryaha eeyaha, sariiraha xayawaanka, Qalabka guryaha sida barkimooyinka ayaa si tartiib tartiib ah u yeeshay suuq cusub.
Waqtiga boostada: Sep-15-2020